abcnepali | » रश्मीको भ्यालेन्टाइन यस्तो ! रश्मीको भ्यालेन्टाइन यस्तो ! – abcnepali
रश्मीको भ्यालेन्टाइन यस्तो !
महेश आचार्य,काठमाडौ :
पैसा हुदा मायाको नाटक गरेपनी त्यो क्षणिक मात्र हैन आखिर पतन नै हुन्छ भन्ने उत्कृस्ठ सन्देश दिएको गीतमा मोडल रश्मी श्रेष्ठले उत्कृस्ठ अभिनय पस्केकी छिन ।
अर्जुन थापा म्युजिक भिडियो निर्देशनमा एक परिपक्व नाम भैसकेको कुरा त यो गीतको परीकल्पना र कलाकारको अभिनय कौशल हेरेर नै थाहा भैहाल्छ । गीत के दिउ म तिमिलाइ को यो सुन्दर भिडियो हेर्दा लाग्छ यो एउटा छोटो चलचित्र नै हो ।
गीतको कथालाइ निर्देशक थापाले साँच्चै न्याय गरेका छन भने सम्पादन पनी आफै गरेका छन । सन्तोष बोहराको शब्दलाइ बिष्णु भट्टको संगीतमा गीतकार र सङ्गीतकारले आफै स्वर दिएका छन भने दुर्गा ब. तामाङ्गको एरेन्ज रहेको यो गीत सुर सङ्गीत स्टुडियो अनामनगर, काठमाडौमा रेकर्ड भएको हो ।
भ्यालेन्टाइन डे को अघिल्लो दिन New Nepal Television नामको युटुब च्यानलबाट सार्बजनिक भएको गीतले सकारात्मक चर्चा बटुलेको छ ।